Shabakadda Gaarka ah ee Gaarka ah (VPN): Tilmaamo aad u faahfaahsan oo ku saabsan Người mới
Adeegyada Shabakadda Khaaska ah ee Khaaska ah (VPN) ayaa ah qaar ka mid ah mawduucyada kulul ee maaddaama tan internetka qarsoodi ah uu dabka ka soo socdo jihooyin badan. Shirkadaha waxay isku dayayaan in ay ururiyaan macluumaad badan oo ku saabsan isticmaalkooda ilaa xad ay noqoto mid aad u culus (Iskuday rabo này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này.
* Isku xirka meelaha ay NSA ay ururiso xogta internetka iyada oo la adeegsanayo "Vô biên thông tin", oo ah falanqayn weyn oo xogta loo isticmaalo Hay’adda Nabadgelyada Qaranka ee Maraykanka (NSA). Xigasho: Người bảo vệ-ka
Muddo sanado ah waxaanu isticmaalnay alaabooyin waaweyn sida Facebook, Google, software-ka iyo in badan oo si dhaqso ah u horumarka tata.
Inkasta oo ay dawladuhu ku adkaanayaan inay xakameyaan xaaladda, marada qaar waxay yihiinaalalda, mararka qaar waxay yihiin iyaga oo dembi isku mid ah oo shirkaduhu aa daha.
Sidaa bừng tỉnh, maxaannu samayn karnaa shakhsi ahaan si aan u ilaalino asturnaanta asturnaanta internetka? VPN của Jawaabta ayaa na soo celineysa mawduucdayada.
0.0.1 Talooyin khabiir ah Qaar ka mid ah bixiyeyaasha suuqa ayaa laga yaabaa inaanay daacad u ahayn adeegyadooda adeegyadooda. Waxay ku andacoonayaan trong ay bixiyaan adeegyo jimicsi meelo kala duwan, laakiin qaar ka mid ah waa kuwo chạy ahaantii ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaa laga yaabaa inaad ku xiran tahay server ah oo ku yaal hal wadan, laakiin waxaad ka heleysaa cinwaan IP ah oo loo qoondeeyey dal kale. Tusaale ahaan, máy chủ-ka Trung Quốc ee dhab ahaantii wuxuu noqon karaa Maraykanka. Tani cách xun tahay sababtoo ah tani waxay ka dhigan tahay in xogtaadu ay dhaafto qayba badan oo ka mid ah qaybo kala duwan oo adduunka ah ka hor inta aysan gaarin meesha ugu damb. Ma jiraan sáp damaanad ah trong tội phạm mạng, hay’adaha sir-doonka qarsoodi ah, ama awooda xadgudubka xuquuqda daabacaadda ay leeyihiin gacanta mid ka mid ah kuwan dhexdexa. Si looga fogaado arrintan, adeegsadayaashu waa inay sameeyaan tijaabinta saxda ah si ay u hubiyaan goobaha dhabta ah ee VPN. Halkan waxaa ah afar qalab oo aad isticmaali karto – Công cụ kiểm tra Ping của CA App Monitor tổng hợp Qalabka Traceroute bằng CA App Monitor Tổng hợp Qalabka BGP Adeegyada Korontada ee Bão Tilmaame-celinta Talo-gelinta aka Windows-ga – Xamza Shahid, BestVPN.co Ammaanka
1.1 Các giao thức Các giao thức chung phổ biến
1.3 2- Giao thức lớp 2 (L2TP)
1.4 Ổ cắm 3-Saxeexa Saxda ah ee Safka (SSTP)
1.5 4 – Nidaamka Badhtamaha Keydka Internetka ee 2 (IKEv2)
1.6 5 – Tilmaame-Dhex-dhexaadin Tijaabo ah (PPTP)
3 Wa-aragnimo VPN-ga ah
3.3 Waxa aan isticmaalay VPN Dành cho
3.3.1 1 – Sahaajin
3.3.3 3-Chơi game
4 Su’aalaha badanaa la isweydiiyo VPN (FAQ)
5 Gabagabo: Miyaad u baahantahay VPN?
Qaar ka mid ah bixiyeyaasha suuqa ayaa laga yaabaa inaanay daacad u ahayn adeegyadooda adeegyadooda. Waxay ku andacoonayaan trong ay bixiyaan adeegyo jimicsi meelo kala duwan, laakiin qaar ka mid ah waa kuwo chạy ahaantii ah. Si kale haddii loo dhigo, waxaa laga yaabaa inaad ku xiran tahay server ah oo ku yaal hal wadan, laakiin waxaad ka heleysaa cinwaan IP ah oo loo qoondeeyey dal kale. Tusaale ahaan, máy chủ-ka Trung Quốc ee dhab ahaantii wuxuu noqon karaa Maraykanka.
Tani cách xun tahay sababtoo ah tani waxay ka dhigan tahay in xogtaadu ay dhaafto qayba badan oo ka mid ah qaybo kala duwan oo adduunka ah ka hor inta aysan gaarin meesha ugu damb. Ma jiraan sáp damaanad ah trong tội phạm mạng, hay’adaha sir-doonka qarsoodi ah, ama awooda xadgudubka xuquuqda daabacaadda ay leeyihiin gacanta mid ka mid ah kuwan dhexdexa.
Si looga fogaado arrintan, adeegsadayaashu waa inay sameeyaan tijaabinta saxda ah si ay u hubiyaan goobaha dhabta ah ee VPN. Halkan waxaa ah afar qalab oo aad isticmaali karto –
Công cụ kiểm tra Ping của CA App Monitor tổng hợp
Qalabka Traceroute bằng CA App Monitor Tổng hợp
Qalabka BGP Adeegyada Korontada ee Bão
Tilmaame-celinta Talo-gelinta aka Windows-ga
– Xamza Shahid, BestVPN.co
Qaar badan oo ka mid ah adeegyada VPN ayaa sidoo kale bilaabay inay hirgeliyaan elevaabooyin ammaan oo ammaan ah si ay uga faa’iideystaan ​​isticmaalkooda. Waxay bilowday inta badan inay ka caawiso joojinta xog ururinta macluumaadka iyo raadinta macluumaadka ee internetka laakiin hadda waxay sii ballaarisay in ay ku jirto xayeysiis-xayiraada.
Cách adagtahay trong la qeexo sida VPN u shaqeeyo haddii aan faahfaahin yar farsamo ku lug laheyn. Si kastaba ha noqotee, kuwa doonaya fikradda asaasiga ah, VPN wuxuu ka dhigayaa đường hầm aammin ah oo ka socda qalabkaaga Máy chủ VPN ka dibna wuxuu ka soo baxaa webka ballaaran ee adduun.
Faahfaahin dheeraad ah, VPN wuxuu marka hore bilaicuta qawaani isgaadhsiin oo ka socda qalabkaaga. Qormadani waxay dejin doontaa xuduudaha sida macluumaadka ay uga soconayaan qalabkaaga si Máy chủ VPN ah. Waxaa jira dhowr nidaam oo muhiim ah oo VPN ah oo caadi ah, inkastoo mid waliba leeyahay faa’iido iyo faa’idooyin gaar ah.
Các giao thức Các giao thức chung phổ biến
Inkastoo ay jiraan qawaaniin badan oo isgaarsiineed, waxaa jira qaar ka mid ah kuwa caadiga ah kuwaas oo inta badan lagu taageeray iyada oo aan loo eegin magaca adeegga VPN. Qaar waa qaar dhakhso badan, qaarkoodna cách gaabinayaan, qaar ka mid ah qaar amaan ah, kuwa kale cách yar yihiin. Doorashadu waa adiga oo ku xiran shuruudahaaga, sidaas darteed tani waxay noqon kartaa qayb wanaagsan oo aad adigu dámen u leedahay haddii aad isticmaalayso VPN.
OpenVPN: Qawaan furan oo furan kaas oo ah isku celcelis xawli ah haddana wuxuu bixiyaa taageero adag oo adag.
L2TP / IPSec: Tani waa arrin caadi ah sidoo kale waxay bixisaa xawaare fiican laakiin si sahlan ayaa u xayiraan boggaga qaar oo aan u diyaarsaneyn isticmaalaha VPN.
SSTP: Ma aha mid si caadi ah loo heli karo oo dhinac ah oo ka mid ah xarig fiican oo aan haysan wax badan oo lagu Talinayo.
IKEv2: Xiriir aad u sarreysa oo gaar ahaan wanaagsan loogu Talagalay aaladaha mobile-ka haddii ay bixiyaan heerarka sirta oo daciif ah.
PPTP: Si dhakhso ah looma oga waxa ay ka buuxsameyso nabadgelyo la’aanta sanadaha badan.
OpenVPN waa a kumbuyuutarka furan ee VPN taasina waa labadeeda iyo sidoo kale daciifnimadooda. Waxyaabaha furan ee furan qof walba ayaa heli kara wof.
Hase ahaatee, OpenVPN waxay noqotey mid aad uwanaagsan waxayna sii ahaaneysaa mid ka mid ah hababka ugu adag ee la heli karo. Waxay taageertaa heerarka sir ah oo aad u sarreeya oo ay ka mid tahay waxa loo tixgeliyo sida ugu badan ee ‘aan la jabin karin’ Mã hóa khóa 256 bit oo u baahan aqoonsiga 2048-bit.
Waad ku mahadsantihiin inaad tahay il furan, waxaa sidoo kale loo habeeyey in la isticmaalo dhamaanba barnaamijyada maanta, laga soo bilaabo Windows iyo macmiilaha si aad u sarreeya sida.
Tusaale – Qaar ka mid ah qalabyada ay taageerayaan NordVPN – Xasuuso sida qalab kasta uu u taageersan yahay nidaamyadeeda gaarka ah
Nasiib darro, amniga sare wuxuu leeyahay hoos u dhicitaankeedana OpenVPN waxaa badanaa loo arkaa inay tahay mid aad u gaabis ah. Hase yeeshee, wax badan oo ka mid ah ganacsiyada, maxaa yeelay waa wax caadi ah in sicirrada sirta loo isticmaalo loo isticmaalo, wakhti intee le’eg ayay qaadanaysaa in lagu.
2- Giao thức lớp 2 (L2TP)
Giao thức đường hầm lớp 2 (L2TP) waa guusha xaqiiqda ah ee Điểm điểm đến giao thức giao thức (PPTP) iyo Lớp 2 Heshiiska Hirgelinta (L2F). Nasiib darro, maadaama ayan iman qalab si loo xakameeyo sirta waxaa inta badan loo qeybiyay nidaamka ammaanka IPsec. Ilaa hadda, isku-dhafkan ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu ammaan badan oo aan laheyn sáp halis ah.
Waxyaabaha ay tahay in la ogaado waa in nidaamkani uu adeegieado UDP oo ku yaal dekedda 500, taas oo micnaheedu yahay in goobaha aan u oggolaanin gaadiidka VPN inay sahaha.
Ổ cắm 3-Saxeexa Saxda ah ee Safka (SSTP)
SSTP waa mid ka yaryar oo loo yaqaan Dadka caadiga ah, laakiin waa wax aad u faa’iido badan sababtoo ah si dhammeystiran ayaa loo tijaabiyey, tijaabiyey, lagama.
Sidoo kale waa mid aad u adag, adoo isticmaalaya furayaasha SSL 256-bit iyo shahaadooyinka 2048-bit SSL / TLS. Sidoo kale nasiib daro macaamiisha Microsoft, markaa uma warea baaritaan Dadweyne – markale, labadaba wanaag iyo xunba.
4 – Nidaamka Badhtamaha Keydka Internetka ee 2 (IKEv2)
Nooca Isweydaarsiga ee Internetka 2 (IKEv2) waxaa iska kaashaday Microsoft iyo Cisco waxaana markii hore loogu talo galay inay si uun u noqdaan borotokoolka tun-ka. Sidaa darteed waxay sidoo kale u isticmaashaa IPSec sirta. Awoodeeda dib ugu xirida xiriirinta lumay ayaa ka dhigtay mid caan ka ah kuwa awooda ka bixiya u adeegsiga guur guura ee VPN.
5 – Tilmaame-Dhex-dhexaadin Tijaabo ah (PPTP)
Giao thức đường hầm giao thức-điểm-điểm (PPTP) waa mid ka mid ah dinosauryada ka mid ah nidaamyada VPN. qawaaniinta ugu wayn ee VPN. Inkastoo ay jiraan duruufaha qaarkood, isticmaalkaas, ayaa nidaamkani uu hoos u dhac ku yimid habsami u socodka sababtoo ah baaxad weyn, isbedel xagga amma.
Waxay leedahay dhowr bini-aadamnimo oo la yaqaan waxaana loo adeegieadey labada nin ee wanaagsan iyo kuwa xunba horay u soo maray, taasoo ka dhigeysa in Dhab ahaantii, waa nimco badbaadinta oo keliya ayaa ah xawaaraha. Sidii aan hore u soo sheegnay, Xidhiidh badan oo ammaan ah ayaa ah, xawaaraha ka sii socda ayaa ah in la arko hoos u dhac.
Habka ugu fudud ee lagu sharxi karo codka ah ee a.
Tusaale ahaan hal erere erey – Cat.
Haddii aan codsigeyga 256-bit u codsanayo ereygan, waxa si buuxda loo xiri lahaa oo aan la xaqiijin karin. Siêu máy tính Xitaa ugu awoodda badan ee adduunka ayaa qaadan lahaa malaayiin sano oo isku dayaya in ay u qortaan ereyga hal xambaarsan 256-bit codsi ku codsatay.
Sidoo kale, mã hóa heerarka waa jaantuska, sidaa daraadeed Mã hóa 128 bit ma bixiyaan badh ka mid ah nabadgelyada mã hóa 256 bit. Inkasta oo ay wali tahay mid adag, khubarada ayaa a vitaminan 128-bit codka ayaa dhawaan la jabin doonaa.
Hababka sirta ah iyo awoodda ayaa sida caadiga ah si toos ah loo adeegsadaa, iyadoo ku xidhan codsiga aan isticmaalno, sida emailka, daalacashada, ama barnaamijyada kale. VPN-yada kale ayaa noo oggolaanaya in aan doorano nooca xarafka ee aan rabno, maaddaama nooca aan dooraneyno uu saameyn doono wax-qabadka VPN-ga.
Sidan ayaannu ‘hagaajin’ samaynnaa waxqabadka adeegeena VPN. Tusaale ahaan, qaar ayaa laga yaabaa trong ay doorbidaan sir-celin xad-dhaaf ah oo ay diyaar u yihiin inay faafiyaan xawaare. Qaar kalena waxay doorbidi karaan xawaare si ay u aqbalaan heerka hoose ee sirta.
Dhammaan kuwan waa lagama maarmaan iyo saameynta ay ku yeeshaan codka sababta oo ah marka aad gasho adeega VPN, xogta aad soo dirto markaad isku dayeyso inaad eegto.
Wa-aragnimo VPN-ga ah
Hadda waxaan ahaa baadhitaan, tijaabin iyo tijaabinta VPNs qaybta ugu fiican ee sannad. Inkastoo aan noqon karin khabiir farsamo ee VPN, haddana waxaan hubaa inaan ogaaday in ka badan inta aan waligey doonayay in aan adeegyadani rabo.
Imtixaanadayda waxaa ku jiray isticmaalka VPNs ah oo ku saabsan goobaha kala duwan, oo ay ka mid yihiin barnaamijyadooda mobile Mobilka, kumbiyuutarrada kumbiyuutarrada kumbiyuutarrada Qaar ka mid ah ayaan si farxad leh ula yaabay, laakiin qaar ayaa si wayn uga niyad jabay.
Waa inaan sheegaa in dhammaadka maalinta, ayadoon loo eegin kartida wax soo saarka, waxaa jirta gebi ahaan sabab la’aan shirkadahan midkoodna adeegga macaamil Haa, waxaan u qiimeynayaa karti-xumo iyo xishood sida ‘adeegga macaamilka xun’.
Qeybta ugu badan, baaritaanadayda waxaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo macaamiisha VPN ee furan ama barnaamij VPN ah oo lagu rakibay mashiinka Windows. Kuwani caadi ahaan waa fiican yihiin, waxaanan ogaaday inay badanaa tahay hadba sida kumbuyuutarka ee aan guriga ku hayno xaddidayo adeegeena VPN wax ka badan adeegga laftiisa.
Waxa ugu muhiimsan ee aan ka barto qalabka waa in haddii aad damacsantahay inaad si toos ah ugu dirto VPN, waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto hal arrin aad uhi Kuwani badiyaa waxay ku kooban yihiin ‘qiimaha’ oh-God-ka ‘ee macaamiisha qadka macaamiisha, xitaa markaa, waa kuwo xadidan.
Tusaale ahaan, waxaan isku dayay qaar ka mid ah VPN-yada si yar Asus RT-1300UHP taas oo haddii ay ku fiicantahay guryaha badankood. Xaqiiqdii waxay xakameyn kartaa xawaaraha gigabit buuxa (qua mạng LAN) iyo ilaa 400 + Mbps trên WiFi. Hase yeeshee, waxay maareyneysaa kaliya wareega ku saabsan 10 Mbps markii VPN la sameeyay. Heerkaas, bộ xử lý-ka ayaa horeyba u xannibay 100% si joogto ah.
Bộ định tuyến Nooca ee aad u baahan tahay in aan ka hadleyno waa inta u dhaxeysa ROG Raadinta GT-AC5300 hoặc Netgear Nighthawk X10 – Kharashka oo aan caadi ahayn inta badan qoysaska. Xitaa markaa, haddii xawaaraha Internetkaagu uu yahay mid degdeg ah – dharbaaxadu waxay ahaan doontaa routerkaaga.
Waxaan bilaabay imtixaan VPN ah oo ku saabsan dòng 50 Mbps kaas oo i siiyay meel u dhow xawaare la xayeysiiyay – badanaa waxaan helay hareeraha 40-45 Mbps. Ugu dambeyntii waxaan u wareegay dòng 500 Mbps oo aan ku wareegsan 80% xawaaraha xayeysiiska – caadi ahaan 400-410 Mbps.
Waxay ahayd markii aan u wareegay xawaaraha sare ee aan arkay garab badan VPN si ay u maareeyaan xawaarahan oo kale sababtoo ah isku dhafan arrimaha. Tani waxaa ka mid ah mashiinka aad ku shaqeyneysid, masaafada u dhaxeysa adiga iyo Máy chủ VPN aad dooratid, waxa ah qaabka codka aad doorbidayso, iyo in ka badan.
Waxa aan isticmaalay VPN Dành cho
1 – Sahaajin
Markii ugu horreysay waxay ahayd baaritaanka xawaaraha badan, oo kaliya si loo ilaaliyo diiwaanka iyo sidoo kale tijaabinta. Marka aan aasaasay aasaas, waxaan bilaabay in aan tijaabiyo goobaha kale ee tải về ama fiidiyoowga daawada. Qeybta ugu badan, waxaan ogaaday trong ku dhowaad dhammaan VPN ay awood u leeyihiin trong ay streaming video 4k UHD.
Torrenting ayaa sidoo kale la tijaabiyey sidoo kale, dabcan, iyo waxaan ogaaday in niyadjab yar. Waxaan u maleynayaa in marka xawaaraha internetka ee gurigaagu gaaro meel gaar ah, waxaad ogaan doontaa in waxqabadka adeeggaaga VPNs uu aad u dhaco haddii aad si weyn u maashash.
Anigu runtii ma ciyaaro badanaa (ugu yaraan ma ahan ciyaaraha udub dhexaad u ah howlaha VPN), laakiin waxaan qaatay xusuusta waqtiyada ping. Haddii aad tahay game thủ rajeynaya inaad isticmaasho VPN si aad u hesho ciyaar ka baxsan wadankaada, waxaa laga yaabaa inaad niyad jabto. Waqtiyada Ping waxay kordhinayaan waxyaabo badan oo aad ka heshay serverada VPN, xitaa haddii xawaaruhu si deg deg ah oo deggan.
Su’aalaha badanaa la isweydiiyo VPN (FAQ)
Ma u baahanahay khadka internetka si aan ugu isticmaalo VPN?
VPN waxaa loogu Talagalay inuu maskaxda ka ilaaliyo goobtaada iyo xogtaada, laakiin waxaad Weli u baahan tahay xiriir internet.
VPN ima qisaimaha adeegga?
Sida dhamaan bixiyeyaasha adeegga, shirkadaha VPN waxay rabaan inaad la joogto waqti dheer, maxaa yeelay taasi waa dakhligooda. Inta badan bixiyeyaasha adeegga VPN waxay bixiyaan shuruudo kala duwan oo lacag-bixinno ah sida bil kasta, saddex-biloodle iyo wixii la mid ah. Waqtiyada badan qorshaha dheer, ka raqiisan sicirkaaga billaha ah, laakiin waa inaad bixisaayouhiiska oo dhan horu mar. Filo inaad bixiso inta u dhaxaysa $ 9 illaa $ 12 bishii celcelis ahaan qandaraasyada bil kasta, iyadoo qiima dhimista ilaa 75% qandaraasyada muddada dheer ah.
Waa tan liiska adeegyada VPN fika halkaasoo aan isbarbar dhig ku sameeyno qiimaha iyo astaamaha.
Isticmaalka VPN ma yareeyaa xawaaraha internetkayga?
VPN waxaa loogu Talagalay marka ugu horreysa si loo ilaaliyo aqoonsigaaga loona ilaaliyo xogtaada mid amaan ah. Nasiib darrose, mid ka mid ah dhibaatooyinka ka dhalan kara xog-dhowrka ee loo isticmaalo in lagu ilaaliyo xogtaada ayaa ah inay hoos u dhigto xiriirkaaga internetka. Sida caadiga ah suulka, filaw inaad gaadho wax aan ka badnayn 70% xawaarahaaga khadka toosan marka aad isticmaalayso VPN. Waxyaabaha kale sida masaafada ka socota server VPN, rarka server-ka iyo wixii la mid ah ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona xawaarahaaga Internetka inta adoo adeegsanaya VPN.
Inta badan bixiyeyaasha adeegga VPN ayaa kuu sheegi doona inaysan xaddidi doonin xawaarahaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado kale oo loo baahan yahay trong la tixgeliyo sidoo kale. Sida aan kor ku soo sheegnay, filaw inaadan helin wax ka badan a xawaaraha khadkaaga dhabta ah.
Sidee ayay u adag tahay trong la sameeyo xiriiriyaha VPN?
Dhinaca midig waa inay u fududaato sida rakibida codsi iyo gelista magacaaga iyo isgarad-ereygaaga. Markaas waxa kaliya ee ay tahay inaad sameysatid waa riix batoonka waxaana kugu xirnaan doona máy chủ VPN ah. Nasiib darrose, tani có iyo goor ma aha xalka ugu fiican oo xiriirada qaarkood ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in lagu qoro qaab wax qabad aan fiicnayn. Bixiyeyaasha adeegga VPN badan sida NordVPN, Surfshark iyo ExpressVPN Waxay yeelan doonaan casharro ku saabsan sida tan loo sameeyo, iyadoo ku guuldareysata taas oo la joogo waa.
Tani waxay kuxiran tahay bixiyeha adeegga VPN ee aad iska diiwaan gelisay. Ku dhawaad ​​bixiyeyaasha dhammaantood waxay taageeri doonaan Windows, MacOS, iyo Linux oo ay weheliyaan aaladaha Mobiladaha guud. Qaar badan ayaa sidoo kale taageeri doona keenista router () halka dhowr ka mid ah ay u adeegsadaan aalado qalaad sida Raspberry Pi.
Mã hóa Maaddaama-ka 256 bit uu gaabin doono xiriirkeyga wax badan, miyay aamin ii tahay inaan isticmaalo Mã hóa 128 bit?
Tani waa w waxar oo xeeladeysan, ilaa aad ayey u xoog badan yihiin. Su’aasha ay tahay inaad isweydiiso waa inay noqotaa, ‘Immisa sirkeyga iyo nabadgelyadeyda qadka tooska ah ay aniga ii qiimeeyaan?
Trang web-yada qaarkood waxay isku dayaan inay iska ilaaliyaan Dadka isticmaala VPN waxayna leeyihiin siyaabo lagu ogaado haddii xiriirka soo galaya uu ka socdo server VPN. Waad ku mahadsan tahay, VPN waxay ka warqabaan tan oo waxay la yimaadeen dhibaatooyinka caawiya. Ka fiiri bixiyeyaasha adeegga kuwaas oo bixiya Tàng hình, ama Nafaqada Server.
Miyaan isticmaali karaa oo kaliya kordhinta biraawsarka biraawsarka ‘VPN’?
Waxaan isku dayay kordhin kumbuyuutarro badan oo VPN ah oo waxaan ogaaday in qaybta inteeda badani, ay hoos u dhacaan laba qaybood oo waaweyn. Waxaa jira kuwa u dhaqma sida xayawaanka oo kaliya oo ka soo kabanaya xiriirka, iyo qaar ka mid ah kuwaas oo u dhaqmi sida kumbuyuutarka xakamaynta barnaamijka buuxa Dhab ahaan waxaa loola jeedaa inaad Weli u baahan tahay barnaamij VPN ah si loo isticmaalo kordhinta. Wareegyada shabakadda VPN badanaa maahan adeegyo VPN buuxa.
VPN sharci ma u leeyihiin trong la isticmaalo?
Haa iyo Maya Inkasta oo waddamada intooda badani aysan lahayn sharciyo ka soo horjeedo adeegsiga VPN, qaar ayaa si buuxda u mamnuucay. Xaaladaha xasaasiga ah, wadamada qaarkood ma mamnuucaan oo keliya isticmaalka VPN laakiin waxay sidoo kale xiri karaan isticmaalayaasha VPN. Nasiib wanaagse, waxaa jira tiro yar oo dalal ah oo ilaa iyo hadda VPN-yada laga mamnuucay.
VPN Miyaan dhammaystiran karin?
Tani waxay inta badan kansrantahay sida ugu aaminka badan ee aad u adeegsaneyso xariirkaaga VPN iyo cidda aad doorato. Waxaa jiray kiisas badan oo loo xiray isticmaaleyaasha VPN ka dib markii ay aaminaad siiyeen shirkad adeeg bixisa oo aakhirkii ku wareejisay diiwaannada isticmaaleyaasha masuuliy.
Gabagabo: Miyaad u baahantahay VPN?
Qarsoodi shakhsiyeed oo shakhsi ah ayaa ku hoos jira hareeraha jihooyin badan waxayna u muuqataa in ay dhacday habeenimadii. Noloshu waa maalmo markii aan ka walwalsannay dambiilayaasha internetka, laakiin hadda waa in aan ka walwalnaa shirkadaha iyo dawladaha doonaya inay xadaan xogtayada Sababta.
Caadi ahaan, baahidaada VPN ayaa si ballaaran u dhici doonta Waxay k lửarantahay wadankee waad ku jirtaa, maadaama mid walbaa uu leeyahay heerar hanjabaad oo kaladuwan. Su’aasha ma ahan sáp lagu jawaabi karo haa ama maya.
Qiimaha suuqa ee VPN toàn cầu (bilyan, USD) – Waxaa laga soo xigtey: Statista
Si kastaba ha ahaatee, laga soo bilaabo heerka korodhka qiimaha suuqa ee adduunka ee VPN, Waxaan dhihi doonaa inay aad u badan tahay inaad u baahan tahay mid Chờ đợi waa waqtigii.
Waxaan si sax ah u isticmaalnay internetka si isku mid ah oo aan marwalba u haysano, oo kaliya in aan u eegno sidii aan noqon karno. Chạy, fayrasyada iyo Xakameynta waxay naga dhigeen kuwo taxadar badan, laakiin wax badan ayaa isbeddelay.
Shakhsi ahaan, waxaan dámemayaa trong adeegga VPN waa Tallaabada xigta qof kasta oo isticmaala internetka. Waxaa jira baahi loo qabo in la jebiyo maskaxda oo aan nagu hanjabineyno waxa aan sameeyno internetka.
Tusaale ahaan u qaado qof kaliya oo doonaya inuu internetka galo oo raadso sawirro dhowr ah bisadaha dễ thương qaarkood. Inta aad taa sameyneyso, macluumaadka sida dhaqankiisa baarista, waxyaabaha uu jecel yahay / u neceb yahay, meesha uu joogour Miyuusan fikirkaasi baqdin ku filneyn inuu ku qasbo nooc ficil?
Sidaas, waxaan dhihi karaa haa, xitaa haddii aad u maleyneyso inaadan u baahnayn VPN – Adiga chạy ahaantii.
« 20 ідей націлювання на основі нецікавих інтересів для наступної рекламної кампанії у Facebook Mạng riêng ảo (VPN): Hướng dẫn rất chi tiết cho người mới »
Shabakadda Gaarka ah ee Gaarka ah (VPN): Tilmaamo aad u faahfaahsan oo ku saabsan Yeni başlayanlar
Waxyaabaha a barbar kartid qoraallada Vampire ee ku saabsan ilaalinta akhristayaasha